जबजको आलोकमा मदन भण्डारीको त्यो न्यूजविक अन्तर्वार्ता – Nepal Press
२०७८ मंसिर १० गते ८:४०
नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीको चर्चा गर्दा बारम्बार उदृत गरिने प्रसंग हो- अमेरिकी अखबार न्युजविकको अन्तरवार्ता । अमेरिकी अखबारले नेपाली नेताको लामो अन्तरवार्ता छाप्नु आफैंमा दुर्लभ थियो नै, अन्तरवार्तामा भण्डारीले बोलेका कुराहरु पनि उत्तिकै चर्चायोग्य थिए ।
सन् १९९१ मे २७ (२०४८ जेठ १३) मा न्युजविकका लागि माइकेल लिट्भिनले भण्डारीको अन्तरवार्ता लिएकी थिइन् । १२ प्रश्नहरु सोधिएको त्यो अन्तरवार्ता ‘नेपालमा कार्ल मार्क्स जीवित छन्’ शीर्षकमा प्रकाशित भएको थियो । अन्तवार्तामा मदनबाट अभिव्यक्त भएका धेरै विषयहरु २० महिनापछि उनले प्रतिपादन गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) को रुपमा दस्तावेजीकरण भयो । २०४९ माघ १४ देखि २० गते सम्म भएको नेकपा (एमाले) को प्रथम खुल्ला तथा पाँचौ राष्ट्रिय महाधिवेसनबाट जबज पारित भएको थियो ।
शक्तिशाली महासचिव भण्डारीले पेलपाल पारेर जबज पास गरेका थिएनन् । जबजको विकल्पमा आएका सिपी मैनालीले झलनाथ खनालदेखि सहाना प्रधानको समर्थनमा ल्याएको ‘परिमार्जित नौलो जनवाद’, मोहनचन्द्र अधिकारीले ल्याएको ‘नौलो जनवाद’ र रघुजी पन्तले ल्याएको ‘सामाजिक जनवाद’ महाधिवेसन हलबाट अस्वीकृत हुँदा मदनको विचार पास भएको थियो । मदनको बिचारमा ५४१ मत आउँदा मैनाली, अधिकारी र पन्तको पक्षमा भने क्रमशः १०१, ५५ र ० मत आएको थियो ।
मदन भण्डारीले सर्वसम्मत पास गराउने पक्षमा थिए । तर, सहमति नजुटेपछि लोकतान्त्रिक विधि अपनाइएको थियो । एमालेको इतिहासमा लोकतान्त्रिक विधि अपनाइएको प्रथम बैचारिक मन्थन त्यही थियो भन्दा हुन्छ ।
१ नम्बर बुँदाको ‘विषय प्रवेश’ खण्डदेखि ९ नम्बर बुँदाको ‘रणनीति–कार्यनीति’ र त्यससँग जोडिएका विभिन्न उपविधासहित तयार भएको जबजको झल्को मदन भण्डारीले न्यूजविकसँगकै अन्तरवार्तामै प्रस्तुत गरेका थिए । २०४८ साल वैशाख २९ गते भएको आम निर्वाचनमा २०५ क्षेत्रमा ६९ सिट ल्याएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रुपमा स्थापित भएको अवसरमा यो अन्तरवार्ता लिइएको थियो । २०१५ सालमा चार सिट मात्रै जितेको कम्युनिष्ट शक्ति २०४८ मा आउँदा बलियो उपस्थितिसहित दोश्रो शक्ति भएको अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नै चर्चा भएको थियो ।
यति मात्र होइन । लामो समयको भूमिगत जीवनबाट खुल्ला राजनीतिमा आएको छोटो समयमै भण्डारीले तत्कालीन लोकप्रिय प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई चुनाव हराउँदै सनसनी नतिजा निकालेका थिए । २०४७ वैशाख १६ गते मात्रै काठमाडौंमा सार्वजनिक भएका भण्डारीले एक वर्षपछि भएको संसदीय चुनावमा बहालबाला प्रधानमन्त्री हराउनु चानचुने कुरा थिएन ।
विश्व कम्युनिस्ट राज्यसत्ताको प्रथम मानक सोभियत संघ ढल्नुभन्दा ६ महिना अगाडि नेपालमा भएको संसदीय चुनावमा कम्युनिष्ट पार्टी प्रमुख प्रतिपक्षी भएकोमा विश्वमा चासो थियो । बढी चासो अमेरिकामा भएको देखिन्छ । त्यसैको फलस्वरुप अमेरिकी अखबारहरुले नेकपा (एमाले) र मदन भण्डारीलाई पछ्याए ।
सन् १९९१ मे १५ (२०४८ जेठ १) मा अमेरिकी अखबार लसएन्जस टाइम्सका पत्रकार मार्क फिनमेनले भारतको राजधानी दिल्लीमा बसेर मदन भण्डारीले बहालवाला प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई हराएपछि राजीनामा दिएको समाचार बनाएका थिए । ‘काठमाडौं गोज माक्र्ससिस्ट’ शीर्षक समाचारमा गणेशमान सिंहका श्रीमती र छोरा दुवैले काठमाडौंमा हारेको समेत उल्लेख गरिएको छ । गणेशमान सिंह चुनाव नउठेर श्रीमती र छोरलाई उठाउँदा दुवैले हारेको र कृष्णप्रसाद भट्टराईले पनि चुनाव हारेको भन्दै तेश्रो वरियाताका गिरिजाप्रसाद कोइराला कांग्रेसको नयाँ राष्ट्रिय नेता बन्ने समाचारमा उल्लेख गरिएको छ ।
लस एन्जलस टाइम्समा मार्क फिनमेनले दिल्लीबाट समाचार लेखेको ठीक १२ दिनपछि मदन भण्डारीको अन्तरवार्ता न्युजविकले छाप्यो । अन्तरवार्ता लिन माइकेल लिट्भिन भने काठमाडौ नै आएकी थिइन् । अब त्यही अन्तरवार्ताको चर्चा गरौँः
जात, भाषा र धर्मको सवाल
मदन भण्डारीलाई माइकेल लिट्भिनको छैटौँ प्रश्न थियो– जात व्यवस्था र धार्मिक स्वतन्त्रतामा तपाईको पोजिसन के हो? यो प्रश्नमा मदनले उत्तर दिएका छन्, ‘हामी विभिन्न जातजातिहरुमा हुने सामाजिक विभेद अन्त्य गर्न चाहन्छौं । तर, हामी विभिन्न जनजातिका संस्कृति, रहनसहन र धर्मको सम्मान गछौं ।
जबजमा जात र धर्मको सवाललमा मदनको यही भाव आएको छ । जबजको ३.१२ बुँदाको ‘जाति, धर्म र भाषाको सम्बन्धमा’ लेखिएको छ ।
कुनै पनि एउटा धर्मको एकाधिकार अन्त्य गरी सबैलाई धार्मिक स्वतन्त्रता र समानता प्रदान गरिनेछ ।
जाति, भाषा, धर्म र भेषभूषमा रहेका सबै एकाधिकार र विशेषाधिकारहरुको अन्त्य गरिनेछ । सबै क्षेत्रमा समानता तथा जनअधिकारको ग्यारेन्टी गरिनेछ । पछि परेका जाति, भाषा, साहित्य र संस्कृतिको ऐतिहासिक संरक्षण, संवद्र्धन र विकासका निम्ति विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
क्षतिपूर्ति सहितको भूमिसुधारको सवाल
विश्वभर कम्युनिष्ट सत्ता आएपछि जमिन्दारहरुको जग्गा बलपुर्वक कब्जा हुन्छ भन्ने धारणा थियो । धेरै देशमा त्यस्तो भएको पनि थियो । यहि मुद्धामा न्युजविकको सातौं प्रश्न आयो मदन भण्डारीलाई । उनलाई सोधियोः तपाँई तपाईको देशका जमिनदारहरुलाई कस्तो व्यववहार गर्नुुहुन्छ ?
मदनको जवाफ थियोः हामी अहिलेका जमिनदारहरुबाट जमिन लिन्छौं । र, जसले खनजोत गरेको छ उसैलाई दिन्छौं । हामी अत्यन्तै शान्तिपूर्ण तरिकाले प्रयास गर्नेछौं । र, हामी पैसा नदिइकन जमिन लिनेछैनौं । यदि जमिनदारले मानेनन् भने मात्रै हामी उनीहरुविरुद्ध बल प्रयोग गर्न बाध्य हुनेछौं ।
न्युजविकसँगको अन्तरवार्तामा मदन भण्डारीले भनेको यहि कुरा उनले जबजमा पनि राखे । जबजको बुँदा ४.११ मा ‘क्षतिपूर्ती’ खन्ड छ । त्यसमा लेखिएको छ, ‘सामन्ति शोषण, सामन्ति भूसम्पत्ति र सामन्तवादलाई समाप्त पार्ने हाम्रो क्रान्तिको एउटा आधारभूत उद्देश्य हो । हामीले नयाँ समाज निर्माण गर्नका निम्ति आमरुपमा सबैबाट सकारात्मक योगदान लिने नीति लिएका छौं । त्यसका निम्ति सामन्ति भूस्वामित्व समाप्त गर्ने, कानुनद्वारा नयाँ हदबन्दी निश्चित गर्ने, क्रान्तिकारी भूमिसुधार गर्ने, त्यस क्रममा क्रान्तिको समर्थन गर्नेहरु, धनी र मध्यम किसानहरुको हदभन्दा बढी जमिन र दोहोरो स्वामित्वको अन्त्य गर्दा साना भूस्वामीहरुको जमिनको कानुनसम्मत यथोचित क्षतिपूर्ति दिने नीति अघि सारेका छौं ।’
वैदेशिक सहयोगको सवाल
आम रुपमा धनी तथा शक्तिशाली देशलाई कम्युनिस्टले ‘औपनिवेशिक’ र ‘सामाज्यवादी’ भन्दै आएका छन् । यसै मेसोमा कम्युनिष्टको सरकार बने विदेशी सहयोग नलिने वा नआउने हो कि भन्ने बारेमा धेरैको चासो थियो । न्युजविकले मदन भण्डारीलाई गरेको दसौं प्रश्न थियोः नेपालमा कम्युनिष्टको बहुमत आएमा वैदेशिक सहयोग कटौती हुने भन्ने कुरामा तपाई कत्तिको चिन्तित हुनुहुन्छ?
मदनको उत्तर थियोः कम्युनिस्ट सत्तामा आएकै कारणले नेपालमा वैदेशिक सहायता कटौती गुर्नपर्ने कुनै कारण नै छैन । तर, हामी हाम्रो देशको स्वतन्त्रता, मानप्रतिष्ठा र सार्वभौमसत्ताको मुल्य चुकाएर भने कुनै पनि वैदेशिक सहयोग माग्ने छैनौं । हामीलाई वैदेशिक सहयोग भन्दा यी कुराहरु महत्वपूर्ण छन् ।
न्यूजविकलाई मदनले भनेको यही कुरा जबजमा समेत अटाएको छ । जबजको बुँदा ४.१० को ‘विदेशी पुँजी र प्रविधि’ मा सामाजवादी देशहरुले समेत वैदेशिक सहायता दिएको भन्दै नेपालले पनि लिने बताइएको छ । भनिएको छ, ‘…..हामी आफ्नो कार्यक्रममा संविधान र ऐनकानूनको सीमाभित्र राष्ट्रिय हितलाई ख्याल राखेर वैदेशिक पुँजी र प्रविधिको लगानी, संरक्षण र उपयोग व्यवस्थित गर्ने सुस्पष्ट कुरा कार्यक्रममा समावेश गरेका छौं । यो पनि विगतका क्रान्तिकारी कार्यक्रमहरुमा समावेश नभएको भिन्न विषय हो ।’
भारतसँगको सम्बन्ध र विदेश नीतिको सवाल
मदन भण्डारीको सम्भावित विदेश नीति र भारतसँगको सवालमा न्यूजविकले सोधेको एघारौं प्रश्न थियोः भारततर्फ तपाईं कस्तो खालको परराष्ट्र नीतिको वकालत गर्नुहुन्छ ?
जवाफमा मदनले भनेका थिएः भारतसँग विगतमा केही असमान र अपमानजनक सम्झौताहरु भएका छन् । हामी सन्धीको समीक्षा गरेर पुनरावलोकनको प्रयास गर्नेछौं । हामीलाई असमान र अपमानजनक हुने प्रावधानहरु हटाउन चाहन्छौं । हामीले चाहेको एकै कुरा भनेको चीन र भारतसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाउनु हो । हामी न चीनपरस्त हुन चाहन्छौं न भारतपरस्त ।
भारतसँगको सम्बन्धको अवस्था र परराष्ट्र नीतिको सवालमा मदन भण्डारीले न्युजविकसँगकै जस्ता कुरा जबजमा राखेका छन् । जबजको बुँदा २ को ‘नेपाली समाजको चरित्र र अन्तरविरोध’ अन्तर्गतको २.३ मा लेखिएको छ, ‘…. ब्रिटिस इन्डिया, स्वतन्त भारत तथा ब्रिटेनसँग नेपालका असमान एवम् अपमानपूर्ण र नेपालको राष्ट्रिय हित एवं स्वाधीनतामाथि आघात पार्न अकेन सन्धिसम्झौताहरु भएका छन् र कायम छन् ।…. यस कारण रास्ट्रको स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता तथा राष्ट्रिय आत्मनिर्भरताका निम्ति नवउपनिवेशी शोषणबाट मुक्त हुने स्वाधिनताको संघर्ष अझै जारी छ ।’
जबजको बुँदा ४.१२ को ‘विदेश नीति’ मा लेखिएको छ, ‘.. हामी निकट छिमेकीहरु, दक्षिण एसियाली देशहरु, हाम्रो क्रान्ति र निर्माणलाई प्रत्यक्ष सहयोग, समर्थन गर्ने देशहरु र अरु मित्र देशहरुका आधारमा क्रमिक महत्व दिएर पञ्चशीलको सिद्धान्तका आधारमा व्यवहारिक ढङ्गले सम्बन्ध स्थापना र विकास गर्ने दृष्टिकोण हामीले अघि सारेका छौं । क्रान्ति र निर्माणका ठोस व्यवहारिक विषयलाई बेवास्ता गरेर केवल सैद्धान्तिक आग्रहको रुपमा मात्रै हामी अघि बढ्न सक्दैनौं ।’
प्रकाशित: २०७८ मंसिर १० गते ८:४०